Akwụkwọ akụkọ Cofttek - Akwụkwọ nri na-emepụta ihe eji emepụta nri
Mgbe nyocha nke 2019 kwubiri na Nicotinamide Mononucleotide dị mma maka oriri mmadụ ma ọ bụrụ na a machibidoro oriri ya na njedebe a kapịrị ọnụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe abanyela ahịa na onyinye ha. Nnukwu nhọrọ a emeela ka ndị na-azụ ahịa nwee mgbagwoju anya banyere nke mgbakwunye Nictonimade Mononucleotide (NMN) kachasị mma maka ha. N'echiche anyị, mgbatị kachasị mma nke ịka nká nke Nico ...
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo mgbakwunye Magnesium L-Threonate, anyị na-akwado ịzụta Magnesium Threonate ntụ ntụ si Cofttek. Companylọ ọrụ ahụ na-azọrọ na ọ na-eme ka bioavailability nke magnesium dịrị ahụ n'ahụ. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwukwa na ntụ ntụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-akwado ọrụ nchekwa ma mee ka arụ ọrụ zuru ezu. Ha na-enyere ndị ọrụ aka ihi ụra nke ọma. Cofttek bụ Anandamide (AEA) na-eweta ndị chọrọ w ...
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ntụ ntụ Palmitoylethanolamide dị elu (PEA) dị elu maka ọrịre, mgbe ahụ ị nọ n’ebe kwesịrị ekwesị. Anyị bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu, ndị nwere ihe ọmụma, na ahụmịhe Palmitoylethanolamide (PEA) na China. Anyị na-enye ngwaahịa dị ọcha ma dị mma nke a na-anwale mgbe niile site na ụlọ nyocha nke atọ nke ụwa iji hụ ịdị ọcha na nchekwa. Anyị na-enyefe iwu mgbe niile na US, Europe, ...